Marary Ambavahaonan’ny Fahafatesana, Mijoro Hanao Izay Hihomehezana Ihany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2017 4:48 GMT
Pikantsarin'ny Lahatsary YouTube avy amin'ny Fikarakarana Ny Fiafaran'ny Fiainana ao India.
Mampisy rarintsaina sy mitaky fanamby ho an'ny fianakaviana rehetra, na olon-tiana ny fikarakarana olona marary iray ambavahaonan'ny fahafatesana. Mampanaintaina sy tsy mampahazo aina ny marary ihany koa matetika ny zava-mitranga. Nanao zavatra [iatrehana] io olana io ny Fikambanana Indiana Misahana ny Fitsaboana Ala-Nenina (IAPC) tamin'ny alalan'ny fanentanana hiresahana ny fahafatesana amin'ny alàlan'ny fampiasana fampihomehezana.
Hita ao amin'ny YouTube ny horonantsary voapaingotra tenirohy hoe #MihomehyFahafatesana. Mampiseho ireo marary eo ambavahaonan'ny fahafatesana manao hatsikana ho an'ny fianakaviany sy ny dokotera ireo lahatsary ireo. Ny hanampy ny olona tena marary mafy handresy ny tahotry ny fahafatesana no tanjona.
Tsy fady ny miresaka fahafatesana. Rehefa manaiky fa zava-dehibe ny miresaka izany ho fikarakarana ny fiafaran'ny fiainana. Tsidiho ny https://t.co/Ss6kGBVvsl raha te-hahafantatra bebe kokoa.
Ny Palliative care (tononina hoe pal-li-ah-tiv) na hotononintsika amin'ny teny malagasy hoe fikarakarana ala-nenina dia fikarakarana ara-pahasalamana manokana hanomezana saina milamina ireo tena marary mafy sy ny fianakaviany. Ao amin'ity dingana ity, avoaka ny sampana fikarakarana marary mafy ireo marary eo ambavahaonan'ny fahafatesana, mba hahafahan'izy ireo mandany ny andro sisa iainany hotronin'ireo fianakaviany sy ny havan-tiany.
Naorina tamin'ny Martsa 1994 ny IAPC ho zaikabe nasionaly mba hifandraisana, hanohanana, ary handrisihana ny tsirairay sy ny fikambanana mandray anjara amin'ny fikarakarana ala-nenina. Nifandinika tamin'ny fananganana ny fikambanana ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana (OMS) sy ny governemanta Indiana .
Tamin'ny herintaona, nanao komandy tamin'ny Medulla Communications ny IAPC, sampan-draharaha misahana seraseran'ny fitsaboana ao India, mba hamorona sy hamelona ny fanentanana “#TenyFarany.” Manangona ny ampahany avy amin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny mpanampy mpitsabo amperin'asa sy efa misotro ronono manerana ny firenena izay afaka nandre ny teny faran'ny marary miala aina ny vokatry ny lahatsary roa minitra. Nasehon'ny filma ny olan'ny “sata” itondrana ny olona maty sy ny fahamendrehan'ny fahafatesana manokana indrindra ao India.
Nahazo ny loka Gold Lions roa tamin'ny Fetibe Lions faha-63 ho an'ny Famoronana Iraisampirenena tao Cannes ny dokambarotra fohy .
Nalefa tao amin'ny YouTube tamin'ny 29 Martsa 2017 ny lahatsary fanentanana farany nataon'ny IAPC izay noforonin'ny Medulla Communications ihany koa . Nahasarika mpijery maherin'ny 387.000 ilay lahatsary tao anatin'ny iray andro monja. Efa misy ny lahatsary efatra hafa ao amin'ity andiany ity, ary nalaza tao anatin'ny fotoana fohy ny tenirohy #MihomehyFahafatesana tao India, raha nizara ny lahatsary ireo mpisera Aterineto .
Ao amin'ny lahatsary etsy ambony, nandrisika ny olona “hihomehy fahafatesana” amin'ny alalan'ny fampisehoana hatsikana ireo marary maromaro. Nofantenana avy amin'ny marary ambavahaonan'ny fahafatesana an-jatony tao amin'ny tambajotra IAPC ny olona voafidy hamoaka hatsikana mahazatra. Avy eo ofanin'ny mpanao hatsikana matihanina izy ireo.
Nisy vokany ny fampiofanana. Raha manao topimaso ny lahatsary, tsy hita miharihary ny maha tsy-matihanina ireo olona eo ambavahaonan'ny fahafatesana ireo ao amin'ny tontolon'ny hatsikana.
Namazivazy i Narendra Mhatre, ilay namindrana voa, hoe : “Tian'ireo Amerikanina raha tahaka ahy ny filohany vaovao. Amin'izay tsy haharitra ela izy”. Hoy i Janice Powell dimy amby enimpolo taona, hoe: “Ity no fotoana voalohany nanaovako karazana fampisehoana toy izao. Iza no mahalala, angamba ity no fotoana hanaovako izany farany. “
Ity fanentanana nataon'ny Serasera Medulla ho an'ny IAPC ity hahatonga anao #HihomehyFahafatesana. Vakio ny: https://t.co/YyumdAdhqQ
Nitantara hatsikana ny vondron'olona marary efa ho faty maromaro . Tena mahafinaritra. Fandaniam-potoana tsara 3 minitra eo amin'ny fiainanao .
Nilaza tao amin'ny antsafa niaraka tamin'ny Fanentanana ao India i Praful Akali, mpanorina sady manam-pahaizana amin'ny fitsaboana ao amin'ny Serasera Medulla, fa “tsy fanentanana fotsiny izy ity fa tetikasa mitohy sy sehatra ho an'ireo marary ambavahaonan'ny fahafatesana mba hizaran-dry zareo ny tantarany sy hanentanana ny olona amin'ny fitsaboana fialana nenina.
Ny fahafatesana no hany fahamarinana, tsy maintsy miaina amin'ny fotoana mandalo isaky ny fiainana isika, tsy mampaninona na faly na malahelo
#MihomehyFahafatesana miaraka amin'i Manudevi Singh
Mety ve ny #MihomehyFahafatesana? Eny! Raha misy marary ambavahaonan'ny fahafatesana ao amin'ny fianakavianao, dia tsy maintsy manao izany ianao! Tsy maintsy manao izany ny fianakavianao! Ary ilay marary no TSY MAINTSY manao izany indrindra!
Ho an'ny maro, sady mamy no mangidy ny lahatsary : feno fihomehezana, ary tsy azo lavina fa sady mampalahelo ihany koa. Nanoratra ilay mpisera Twitter Ganashan Iyer, ohatra :
Vao avy nijery ny lahatsary #MihomehyFahafatesana aho . Tena mampandatsa-dranomaso. Tena zavatra sarotra tokoa ny miatrika ny fahafatesana kanefa araka ny voalazan'izy ireo hoe: mahereza hatrany!